प्रियंका र दिपकलाई किन दिपाश्रीले दिईन् यस्तो अर्डर ? « Mazzako Online
प्रियंका र दिपकलाई किन दिपाश्रीले दिईन् यस्तो अर्डर ?
चलचित्र ‘६क्का पञ्जा’ले फ्लोर ज्वाईन गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । यही चैत्र ८ गतेदेखि करिब १ महिनाको सेड्युलमा सिनेमाको छायांकन हुनेछ । पनौतीको नेपालथोक अनि काठमाण्डौंमा सुटिङ्ग हुने यो सिनेमाको निर्देशन दिपाश्री निरौलाले गर्दैछिन् । सिनेमा छायांकनमा जानु अघि नै दिपाश्रीले कलाकारहरुलाई क्यारेक्टरमा आउनका लागि भनेर ‘वेट लुज’ र ‘गेन’ गर्ने कुरामा अर्डर दिई सकेकी छिन् ।
चलचित्रका कलाकार दिपकराज गिरीलाई उनले १० केजी ‘वेट लुज’ गर्न भनेकी थिईन । मज्जाको अनलाईनसँगको भेटमा दिपकराज गिरी आफुले ‘वर्कआउट’ गर्दै गरेको बताए । ‘निर्देशक कडा परिछन् यसपाली, निकै गाली खाईएला जस्तो छ, मलाई मेरो क्यारेक्टर चाहियो मात्रै भन्छिन् ‘, दिपकले हाँस्दै सुनाए, ‘तर जे होस् निर्देशकको खोजेको क्यारेक्टर बन्न निकै मेहनत गरिरहेको छु ।’
त्यस्तै, नायिका प्रियंका कार्कीलाई उनले ७ केजी ‘वेट गेन’ गर्न भनेकी थिईन् । यतिबेला प्रियंकाले पनि ‘वेट गेन’ गर्न मज्जाले खान थालेको बताएकी छिन् ।
चलचित्रकी निर्देशक दिपाश्रीले दिपक र प्रियंकाले क्यारेकटरमा आउन गरेको मेहनतले चलचित्रलाई निकै फाईदा पुग्ने बताईन । हाँस्यकलाकारहरुको बाहुल्यता रहेको यो सिनेमामा नायिका प्रियंकाको हिरोको रुपमा दिपकराज गिरी, केदार घिमिरे ‘माग्ने बुढा’, शिवहरी पौडेल, जितु नेपाल, बुद्धि तामाङ्ग ‘हैट’ लाई देख्न पाईनेछ । छायांकनको अन्तिम समयमा आाएर सिताराम कट्टेलको पनि चलचित्रमा ‘केमियो रोल’ हुने प्रवल सम्भावना बढेर गएको छ ।
‘६क्का पञ्जा’मा राजनराज शिवाकोटी र दिपक शर्माको संगीत रहनेछ । सिनेमालाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिच्नेछन् ।